नेपाल लगानीका लागि सुगम गन्तव्यः अर्थमन्त्री पौडेल ! « MNTVONLINE.COM
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक लगानीका लागि नेपाल सुगम गन्तव्यमा रुपमा स्थापित भएको बताएका छन् ।
उनले गैरआवासीय नेपालीको छरिएर रहेको सानो सानो पूँजीका अलावा विदेशी लगानीकर्ताको पुँजी र प्रविधि ल्याउनका लागि क्रियाशील हुन आग्रह गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी ल्याउन र नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने तथ्यलाई प्रचारप्रसार गर्न अनुरोध गरे ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्रीले गैरआवासीय नेपालीले नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रका लगानी गर्ने ध्येयका साथ १० अर्ब पुँजी भएको एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेडको औपचारिक शुभारम्भ गरे । सो फण्डमा सरकारको पाँच प्रतिशत लगानी रहनेछ । उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिमा व्यवसायी उपेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेका छन् ।
यस्तै अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिका रुपमा सहसचिव दीर्घराज मैनालीलाई सञ्चालक सदस्यको रुपमा चयन गरेको छ । अन्य सञ्चालक सदस्यहरूमा कुमार लम्साल, जीवा लामिछाने, डा. बद्री केसी, सोनाम लामा, महेश श्रेष्ठ, गौरी जोशी रहेका छन् । शनिबार मात्रै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईलाई चयन गरिएको थियो ।
हाल कम्पनीले दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको र संस्थापकबाट रकम जुटाउने काम गरिरहेको छ । एनआरएनएका अनुसार हालसम्म करिब तीन अर्ब बराबरको रकम जम्मा भइसकेको छ । सो कम्पनीमा १०० बढी संस्थापक सदस्य रहनेछन् । कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाले सरकारले लगानीका लागि सबै प्रकारको सहजीकरण गरेको र केही टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषय भए त्यसलाई सम्बोधन गरिने बताए ।